देश/विदेश Archives – Page 15 of 18 – जय होस्
भनिसा बनिन् ‘मिस वर्ल्ड २०१८’
विदेश । मेक्सिकोले यस वर्षको ‘मिस वर्ल्ड २०१८’ को उपाधि जितेको छ । चीनको सान्यमा सम्पन्न प्रतियोगितामा मेक्सिकोका लागि भनिसा पोन्सले सो उपाधि जितेकी हुन् । २६ वर्षिया मिस मेक्सिको …
देश । ‘पोखरा स्काई स्पोर्टस’को ग्राण्ड ओपनिङको हुने भएको छ । एकैछाना मुनि विभिन्न सुविधा प्रदान गरिने ययस लक्जरी स्काई स्पोर्ट्सको ओपनिङमा विभिन्न कार्यक्रम हुने भएको छ । पोखराको न्युरोड …
देश । प्रदेश ५को राजधानी बुटवलमा पहिलो पटक फेसन शो कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । पेजेन्ट नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मौलिक सांस्कृतिक तथा आधुनिक फेसनलाई समेटेर शो देखाईएको …
काठमाण्डौमा शिव कृपानन्दको ध्यान शिविर
देश । मानिसका मष्तिस्कमा धेरै प्रश्नले खेल्ने गर्छन । हामी किन दुखी हुन्छौं ? हामीमा किन गुनासो रहन्छ ? यसको सरल जवाफ हो, अपेक्षा । जब हामी अरुप्रति अपेक्षा गर्छौं, …
सन्दीप कमाल : डेब्यु खेलमै लिए तीन विकेट
युएर्युइ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा जारी क्रिकेटको सबैभन्दा छोटो स्वरूपको प्रतियोगिता टी-१० क्रिकेट लिग अन्तर्गत आफ्नो डेब्यु खेलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले कमाल गरेका छन् । पछिल्लो …
देश । थम दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता यही मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ । राजधानीमा एक पत्रकार भेटघाटको आयोजना गर्दै शारीरिक सुगठन तथा फिटनेसको अन्तर्राष्ट्रिय …
देश । नेपाल सरकारले आजदेखि परिचय-पत्र वितरण गरेको छ । पाँचथरको शहीद मञ्चमा सोमबार आयोजित बिशेष कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पहिलो राष्ट्रिय परिचयपत्र फिदिम नगरपालिका-४ शान्तिपुरकी १०१ वर्षीया भगवतीदेवी …
रत्नपार्कमा १५ औं काग सम्मेलन
देश । आजबाट तिहार पर्व सुरु भएसँगै पहिलो दिन काग तिहार मनाइएको छ ।यसका साथै मुखबाट कागको आवाज निकाल्न सक्ने कागे बाहुनको नामबाट परिचित रमेश दुलालले राजधानीको रत्नपार्कमा १५ औं …
फेशन । रिवन इन्टरटेनमेन्ट प्रालिको आयोजनामा केही अघि राजधानीमा भएको मिसेस नेपाल इन्टरनेशनल २०१८ की विजेता चन्दा थापा गिरीलाई सिंगापुरमा भएको विबाहित महिलाहरुबिचको अन्तराष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस इन्टरनेशनल २०१८ मा …
‘फेस अफ मारवाडी किडस २०१९’ हुदै
फेशन । सौन्दर्य प्रतियोगिता फेस अफ मारवाडी किडस २०१९ हुने भएको हो । फेस अफ मारिवाडी मिस, मिसेस एन्ड मिष्टर सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको पेजथ्री हट कल्चरले यस प्रतियोगिताको तयारी …